इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ – Health Post Nepal
२०७६ फागुन ७ गते | Wednesday, 19 Feb, 2020
डा. भगवान कोइराला नेतृत्वको इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थलाई काठमाडौंमा ४१ रोपनी १० आना सरकारी जग्गा
सरकारले वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला नेतृत्वको काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थलाई काठमाडौंमा ४१ रोपनी १० आना ३ पैसा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–७ मा नेपाल सरकारका नाममा रहेको कित्ता नं. २३ को उल्लेखित परिमाणको जग्गा इन्स्टिच्युटलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थले राजधानी काठमाडौंसहित मुलुकका सातै प्रदेशमा गैरनाफामूलक सुविधासम्पन्न बाल अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा डा. कोइरालाले गत साता गरिसकेका छन् । गैरनाफामूलक संस्था र व्यक्तिसँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा १०० बेड र प्रदेशमा कम्तीमा ५० बेडका स्याटलाइट अस्पताल स्थापना गर्ने डा. कोइरालाको योजना छ । सोही प्रयोजनका लागि सरकारले डा. कोइराला नेतृत्वको इन्स्टिच्युटलाई उक्त जग्गा उपलब्ध गराएको हो ।
गत शनिबार डा. कोइरालाले महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको घोषणा गरेलगत्तै दुई दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बाल अस्पताल परियोजनाका लागि लिजमा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएको हो ।
गत शनिबार डा. कोइरालाले महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको घोषणा गरेलगत्तै दुई दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बाल अस्पताल परियोजनाका लागि लिजमा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराएको हो । जग्गाप्राप्तिसँगै डा. कोइरालाको परियोजनाले गति लिने भएको छ । जग्गा किन्न नपरेमा परियोजनाको लागत करिब ८० प्रतिशतले कम हुने डा. कोइरालाले यसअघि नै बताइसकेका छन् । अवकाशको सँघारमा पुगेका डा. कोइरालाले आफ्नो सरकारी सेवाबाट निवृत्त जीवनका महत्त्वपूर्ण क्षण यसै परियोजनालाई सफल बनाउन प्रयोग गर्ने प्रण गरेका छन् ।
कारिब २ अर्ब लागतको परियोजनाको सुरुवाती चरणमा २ वर्षभित्र काठमाडौंमा १०० बेडको बाल अस्पताल बनाइसक्ने लक्ष्य छ । यसका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराइसकेकाले अब निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ । काठमाडौंमा अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि प्रदेश सरकारहरुको समन्वय र सहयोगमा अन्य ६ प्रदेशमा पनि अस्पताल स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइने डा. कोइरालाको भनाइ छ ।
डा. कोइरालाले ३५ वर्षको चिकित्सा सेवा, २५ वर्षको शल्यचिकित्सा र २० वर्षको व्यवस्थापन अनुभव, सम्बन्ध र विश्वासलाई एकीकृत गरी बाल स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योजना अगाडि सारेको डा. कोइरालाको भनाइ छ । ‘मुटुमा निःशुल्क शल्यक्रिया पनि सुरु भयो, तर मुटु मात्रै ठिक गरेर बालस्वास्थ्यका धेरै कुरा बनेनन्,’ डा. कोइराला भन्छन्, ‘बालस्वास्थ्यमा अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न सेन्टर बनाउने मेरो सपनाको आधार त्यही हो ।’
Posted in खबर, मुख्य खबरTagged इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिकLeaveaComment on डा. भगवान कोइराला नेतृत्वको इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थलाई काठमाडौंमा ४१ रोपनी १० आना सरकारी जग्गा
दाँतको उपचार गराउन डराउनुहुन्छ?
वार्षिक २५ हजार नेपाली नर्सलाई रोजगारी दिने जापानको प्रस्ताव
डा उपेन्द्र देवकोटाको अभाव खड्किरहनेछ गौरीबहादुर कार्की
डा केसीको माग सम्वोधन गर्न माग गर्दै काँग्रेसद्धारा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सदनमा पेश गर्दै
प्युठानमा एकैदिन ४८ विद्यार्थी बेहोस, हप्तादिनका लागि विद्यालय बन्द
प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय बन्न सक्षम छ : उपकुलपति डा रौनियार [भिडियो वार्ता]
डा गोविन्द केसीका सबै माग आयोग बनेपछि कार्यान्वयन हुन्छ : गिरिराजमणि पोखरेल [अन्तर्वार्ता]
स्वास्थ्य बिमा नवीकरण चुनौतीपूर्ण छ : डा मदनकुमार उपाध्याय [अन्तर्वार्ता]
किन हुन्छ मुटुको चाल गडबडी? लक्षण र उपचार
हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै
Tweets by healthpostnepal